Sida loo kiciyo kobcinta keydinta ee Apple Music | Wararka IPhone
Sida loo kiciyo kobcinta keydinta ee Apple Music ee iOS 10
Qalabka 16GB, boosku waa dagaal muhiim ah, waa wax si isa soo taraysa u yareyn doona muhiimada, maaddaama Apple ay ka saartay dhammaan alaabada kaydinta 16GB dukaanka Apple, si xad dhaaf ah iPhone SE, aaladda mobilada ee Apple Rakhi. Tan awgeed, Waxaan ku baraynaa sida loo keydiyo booska haddii aad tahay isticmaale joogto ah ama aad ka tirsan tahay Apple Music, Nidaamka muusikada ee Apple ee qulqulka leh wuxuu leeyahay isdhexgal aad u fiican, wuxuuna daneynayaa inaan keydinno inta ugu badan ee banaan ee keydkeena ah Bal u fiirso tallaabooyinkan fudud haddii aad rabto inaad meel ku keydiso xusuustaada iPhone-ka.
Thanks to nidaamkan, waxaad ka go'aamin doontaa 2GB ee kaydinta dhammaan heesaha la soo dejiyey. Haddii ay dhacdo inaad go'aansato inaad wax badan soo dejiso, nidaamku wuxuu si otomaatig ah u tirtiri doonaa sawirro duug ah oo aadan si joogto ah u tarmin. Aan aragno sida aan udhaqaajin karno shaqadan. Waxaan dooneynaa inaan xoojino in doorashadan kaliya lagu heli karo macruufka 10.
Ugu horreyntii, waxaan u tagi doonnaa barnaamijka Settings-ka ee iPhone-keena, dabcan. Kadib, waxaan u dhaqaaqi doonnaa barnaamijka «Muusigga», ama waxaan isticmaali doonaa mashiinka raadinta dejimaha, horayba waad u ogtahay inay ku jirto meesha ugu sareysa, wax la mid ah goobaha Muuqaalka. Mar haddii aan gudaha u galno Muusikada iyo haddii aan bixinnay rukummada Apple Music, ikhtiyaarka "hagaajinta kaydinta" ayaa soo muuqan doona. Waxaan si fudud u riixnaa, oo doorannaa keydinta aan rabno, 2GB, 4GB, 8GB ama 16GB oo ah meesha ugu badan. Intaas waxaa sii dheer, agtiisa waxaa ka muuqan doona tirada ugu yar ee heesaha aan ku keydin karno keydkaas. Tanina waa habka ugu fudud ee lagu keydin karo booska muusigga. Dhanka kale, waxaan wali ka sugeynaa Apple inay go'aan ka gaarto inay noo ogolaato inaan tirtirno xogta codsiyada, maaddaama qaar sida Facebook ay ku kaydsan yihiin ku dhowaad 1GB xog ah, halka codsiguna uu dhab ahaan deggan yahay oo keliya dhowr boqol oo MBs. Waxaan rajeyneynaa in taladani ay ku caawisay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo kiciyo kobcinta keydinta ee Apple Music ee iOS 10
suuqa Yuusuf dijo
Ikhtiyaarka, sida saxda ah, wuxuu leeyahay "booska ugu yar", ugu badnaan ma ahan, sidaa darteed waxaan ka baqayaa in howlgalka xulashadani uusan ahayn sida ku xusan qodobka.
Waxay umuuqataa inay sii sugi doonto ilaa inta ay si dhib yar uga banaan tahay qalabka si loo bilaabo tirtirka muusikada (ama keydinta Apple Music faylasha) ilaa xadka aan u dejinay.
Jawaab Jose Mercado
Qeyb kale, oo laxiriira kaydka iyo dhibaatooyinka xogta ee barnaamijyada sida instagram, facebook iyo snapchat-ka oo gaara in kabadan 1gb. Waxay tirtiri karaan barnaamijyada kadibna dib u rakibi karaan, si dib loogu soo celiyo xusuustaas.
Isbarbardhigga u dhexeeya Dash, headphone-ka iyo AirPods
Apple iyo Foxconn ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay wax soo saaraan dalka Hindiya